၁ - ၄ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ စိတ်ဆိုးပြီး ပေါက်ကွဲတာတွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်အောင် လုပ်ယူကြမလဲ | Radio Veritas Asia
၁ - ၄ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ စိတ်ဆိုးပြီး ပေါက်ကွဲတာတွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်အောင် လုပ်ယူကြမလဲ
ဒီနေ့မှာ ၁ - ၄ နှစ်လောက်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ စိတ်ဆိုးပြီး ပေါက်ကွဲတာတွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်အောင် လုပ်ယူကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရှင့် မိမိကလေးက ဘာအကြောင်းးပြချက်မှမရှိပဲ ရုတ်တရက်ဒေါသထွက် ပေါက်ကွဲငိုယိုတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ? … ဒါကိုတော့ မိဘက မိမိကလေးအပေါ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့ လိုသလို ကြီးပြင်းလာအောင်လည်း မွေးမြူထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ တပတ်တခါလောက် အခုလို ကဖျက်ယဖျက် ဖြစ်တတ်ကြတာပါ။
သူတို့လိုချင်တဲ့ ကစားစရာ အရုပ်မရလို့လား?
သူတို့ရဲ့ မသင့်တော်တဲ့ အစားအစာကို စားချင်တာ မရလို့လား?
သူ့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သူက သူ့အနားမှာ ဒီကလေးငယ်လေးတွေက စကားမပြော တတ်သေးပေမယ့် ကျယ်လောင်စွာ ငိုပြလိုက်ရင် သူလိုချင်တာ ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ အဲဒီလို ငိုလာရင် သူ့ကို ထိန်းကျောင်းတဲ့သူက ကိုယ်လက်အမူအယာနဲ့ မေးရတော့မယ်။ ဘာလိုချင်တာလဲ။ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ။ စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေခံစားနေရတာလဲ စသဖြင့်ပေါ့နော် လုပ်ပြရတော့မယ်။
မိမိကလေး အခုလို ရူးရူးမိုက်မိုက်ဖြစ်နေတာကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲ?
အရင်ဆုံး မိမိကလေး စိတ်သက်တောင့်သက်သာရှိအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ဥပမာ- Shopping Mall ကို သွားမယ်ဆိုရင် ကလေးကိုပါ ခေါ်သွားရမှာဆိုတော့ သူအကြိုက်ဆုံး အရုပ် နည်းနည်းကြာမယ်ဆိုရင် သူ့ကို အိမ်မှာ သိပ်ရင် ခြုံပေးတဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက်စောင်ပါးလေး ယူသွားတာဟာဖြင့် ကလေးက အိပ်ချင်ရင် အဲဒီစောင်လေးနဲ့ ပတ်ပြီး သိပ်လိုက်ရင် သူ့စိတ်ထဲ အိမ်မှာလိုပဲလို့ ခံစားရပြီး မငိုတော့ဘူး။ ကျီမကျတော့ဘူး။ ကလေးရော မိဘပါ စိတ်သက်တောင့် သက်သာရှိသွားစေပါတယ်။
မိဘအနေနဲ့ ကလေးကို သူ့စိတ်ကြိုက် သူ့သဘော သူ့ဆန္ဒနဲ့ ရွေးချယ်စေတာဟာလည်း ကလေးရဲ့စိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ ဥပမာ - မနက်အိပ်ရာကထရင် အရင်မျက်နှာ သစ်မလား။ ညအိပ်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားအရင်လဲမလား မိမိကလေး စိတ်ကြိုက်မေးပြီး လုပ်ပေးပါ။ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုပေးပါ။ ဒါဆိုရင် သူတို့ကြိုက်တာ ရွေးပြီးလုပ်မယ်။ မှားခဲ့ရင်လည်း သူသိသွားမယ် သူ့ဖာသာ ဆုံးဖြတ်တတ်သွားမယ်။
ကိုယ့်ကလေးက ဘာကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မိဘကရှာတတ်ရမယ်။ ၂ နှစ် ၂နှစ်ခွဲလောက် ကလေးက စကားနည်းနည်းပဲ ပြောတတ်သေးတယ်။ သူက စကားနဲ့ မပြော နိုင်တော့ သူ့ရဲ့အာသီသတွေ ပြင်းပြတဲ့ အတွေးတွေ လိုချင်ဆန္ဒတွေ မပြောတတ်တဲ့ခါမှာ စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက် ပေါက်ကွဲပြတတ်လာတယ်။ အဲဒီတော့ မိဘအနေနဲ့ ကိုယ်နှုတ်အမူအယာနဲ့ ပြပြီး ကလေးဖြစ်ချင်တဲ့ အရာကို နှုတ်ကနေအဲဒီလို အသံထွက်ရတယ်။ ဒီလိုပြောရတယ်။ အစားအစာ စားချင်တာတို့ အိပ်ချင်တာကို ကိုယ်အမူအယာနဲ့ ပြပေးတာက အင်မတန်မှ အံ့ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး ထိရောက်လှပါတယ်။
မိဘဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်တွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်။ ဘယ်လို ဒီ stress out လုပ်မယ်ဆိုတာ မိမိကိုယ်တိုင်သိသလို မိမိကလေးစိတ်ဆိုး ဒေါသဖြစ်ပေါက်ကွဲနေရင် စိတ်ပြောင်းသွားအောင် ကလေးအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကို ဖွင့့်ပြီး ဖတ်ပြတာ။ သူအကြိုက်ဆုံး ပုံပြင် အကြောင်း ပြန်ပြောပြတာတွေက ကလေးရဲ့စိတ်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားသလို ဖြစ်စေပြီး ဟာသလေးလုပ်ပြတာ funny face ပေါ့နော်။ ရီချင်လာအောင် မျက်နှာ အမူအယာလုပ်ပြတာတို့က ကလေးရဲ့စိတ်ကို ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။
မိဘတွေဆိုတာ ကလေးတယောက်ရဲ့ ဆရာသမားကောင်းတယောက်ပါ။ မိမိကလေးက ငိုယိုနေလို့ အော်ဟစ်ဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲနေမဲ့အစား မိမိကလေး နားလည်အောင် ဘာဖြစ်ချင် တာလဲ ဘာပြောချင်တာလဲ စကားလုံးကို သင်ပေးပါ။ နားလည်ပြီး ပြောတတ်လာတယ်။ ဘယ်အရာက မှန်တယ်။ ဘယ်အရာက မှားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပါ။ မိဘမှာလည်း သောကတွေရှိတဲ့ အတွက် ဒေါသထွက်တဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေ မိဘပါးစပ်ကထွက်ရင် သားသမီးပါးစပ်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ထွက်လာမှာပဲ။
ဘယ်တော့မှ ကလေးကို ရန်စတဲ့ ပုံစံမျိုး မလုပ်ဖို့ မစဖို့ လိုပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကိုပဲ သုံးပေးပါ။
ကလေးက ငြီးငြူနေမယ်။ အီနေမယ်ဆိုရင် မိဘက မျက်နှာကို ရှေ့တည့်တည့်ထားပြီး ခပ်တည်တည်နေလိုက်ပါ။ ဒါက သူ့ကို warning sign ပဲ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခေါင်းကို ခါမယ်းပြပါ။ ဒါက family rule ကို အစမ်းသဘောလုပ်ပြတာပဲ ဖြစ်တယ်။
အမှန်တကယ်မိသားစုတိုင်းမှာတော့ ဥပဒေပုံသေမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိကလေးကိုတော့ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ် အငိုတိတ်အောင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ attitude သဘောထား ကိုယ်နေဟန်ထားတွေနဲ့ အခုတင်ပြခဲ့တဲ့ tips လေးတွေက အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ sharing ပေးရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
ကြောက်ရွံ့မှု နဲ့ သောက စိတ် ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကို ရပ်တန့်သွားစေဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ
ချစ်သူဆီကနေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့ ချစ်သူကို ဘယ်ကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံဖို့ ဖို့လိုမလဲ